ANDROID ပေါ်မှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အန်းဒရွိုက် - 2019
စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များကိုနေ့စဉ်အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီတဲ့အခါအဲဒီအချိန်တုန်းကလူအတော်များများစီမံခန့်ခွဲမှုမရေမတွက်နိုင်သောအဆက်အသွယ်နှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းနေကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အလိုရှိသောဖုန်းနံပါတ်အဘို့အရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများအကြောင်းကိုမေ့လျော့နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်သုံးပြီး, ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အတော်ကြာထိရောက်သောနည်းလမ်းများဆွေးနွေးထားပါတယ်။
Android ပေါ်မှာအဆက်အသွယ် Save
အနာဂတျမှာကစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဖုန်းစာအုပ်၌သူတို့ကိုဝင်ရောက်သည့်အခါလူများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏မှန်ကန်သောဒေတာသုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ။ ဒါ့အပြင်သင်ဤဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့သွားကြသည်ရှိရာကြိုတင်ဆုံးဖြတ်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြားစက်ကိရိယာမှသူတို့ကိုရွှေ့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ Third-party applications များဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အသုံးပြုသို့မဟုတ် embedded နိုင်ပါသည်။ ဘယ် option ကို သာ. ကောင်း၏ - သငျရှေးခယျြ, ကိရိယာနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏စွမ်းရည်များအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
Method ကို 1: Google ကဆက်သွယ်ပါ
ဤနည်းလမ်းကို Google Mail ကိုအသုံးပွုရသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။ ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ကိရိယာမှဒေတာကိုရှာနဲ့စာအဆက်အသွယ်တဲ့သူအပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုအဆက်အသွယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းအကြံပေးခြင်း, လွယ်ကူခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Google အဆက်အသွယ် Download
လျှောက်လွှာ Install လုပ်ပါ။ အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်ရှိအပေါငျးလက်ခဏာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်လျော်သောလယ်ကွင်းထဲသို့သတင်းအချက်အလက် Enter ကိုနှိပ်ပါ "Save".
သင်အမြဲတစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုရှာဖွေနှင့်မည်သည့်ကိရိယာမှသူတို့ကိုရယူနိုငျသောကွောငျ့ဤနည်းလမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမတင်သွင်း, တင်ပို့မှုနှင့်အခြားထိန်းသိမ်းရေးမရှိတော့လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်သင့်အကောင့်၏လုံခြုံရေးခိုင်မာစေရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ထံ၌စကားဝှက်ကိုမမေ့မလြော့ပါအစီအမံယူရန်လိုအပ်ကြောင်း။ တစ် Google အကောင့်ထဲတွင်ဖုန်းနံပါတ် Save သင်တို့သည်လည်းအခြား application ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Google က Android ကိုအတူအဆက်အသွယ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နည်း
Method ကို 2: Built-in application ကို "ဆက်သွယ်ရန်"
built-in Android ပေါ်မှာအဆက်အသွယ်စီမံခန့်ခွဲမှု application ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, သို့သော်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုစနစ်၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာ Start: ကပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်က "အားလုံး Applications ကို" တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအပေါငျးလက်ခဏာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ စည်းကမ်းအဖြစ်ကအဓိကလျှောက်လွှာ window ၏အထက်ပိုင်းသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။
တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်လျှင်, အကောင့်သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုတည်နေရာကိုရွေးပါ။ အဆိုပါကိရိယာသို့မဟုတ်တစ်ဦးက Google အကောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ချွေတာရေး။
အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်လျော်သော input ကိုလယ်ကွင်းမှာဒီ tapnite နှင့်ဒေတာများအတွက်ကီးဘုတ်, အမျိုးအစားကိုသုံးနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့, ကင်မရာ၏ပုံရိပ်သို့မဟုတ်လူ့ပုံနှင့်အတူ icon ပေါ်မှာ tapnite ။
စာနယ်ဇင်းများ "ကွင်းဆင်း Add"အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်။
စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ" သို့မဟုတ် "Save" အဆိုပါ created အဆက်အသွယ်ကယ်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ။ တချို့ devices များတွင်, ခလုတ်ကိုတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားတူပေမည်။
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်သစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေဘို့, သင်အတွက်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်နိုင်သည် "အနှစ်သက်ဆုံး"ဒါကြောင့်သင်ကလျင်မြန်စွာသူတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တချို့ကပစ္စည်းတွေလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် access ကိုများအတွက်ပင်မမျက်နှာပြင်မှတစ်ဦးဖြတ်လမ်း function ကိုမရရှိနိုင်အဆက်အသွယ်ထည့်ပါ။
Method ကို 3: dialer အတွက်အရေအတွက်ကသိမ်းဆည်း
app ကိုဖွင့်ပါ "တယ်လီဖုန်း" တစ်ဦးဟန်းဆက်၏ပုံစံ icon တစ်ခုနှင့်အတူ။ အများအားဖြင့်ကလျင်မြန်စွာ Access ကို toolbar ကိုသို့မဟုတ် tab မှာတည်ရှိပါတယ် "အားလုံး apps များ".
အဆိုပါဂဏန်းခလုတ်အလိုအလျှောက်ပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်, အိုင်ကွန်ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်နေ့ကို item မှ skip ။
လိုအပ်သောအရေအတွက်ကို Enter - ဒီနံပါတ်ကိုသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ထဲမှာမပါလျှင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာရှိပါလိမ့်မယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "အဆက်အသွယ်အသစ်".
(အပိုင်း၏။ Item3"Built-in application ကို" ဆက်သွယ်ရန် "ကိုကြည့်ပါ) ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သိုလှောင်မှုတည်နေရာကိုရွေးပါ, နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ, တစ်ဦးဓာတ်ပုံကို add နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ကြောင့်သိမ်းဆည်းပါ။
အလားတူပင်သင်ဝင်ခေါ်ဆိုမှု၏နံပါတ်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုမှုစာရင်းအတွက်အလိုရှိသောအရေအတွက်အားရှာမည်, ခေါ်ဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်ဖွင့်လှစ်, အဲဒီနောက်နိမ့်လက်ျာဘက်သို့မဟုတ်အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိအပေါင်းလက္ခဏာသက်သေကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Method ကို 4: စစ်မှန်သောဖုန်း
အဆင်ပြေခြင်းနှင့် functional အဆက်အသွယ်မန်နေဂျာ, Play Market ကိုအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်အလွယ်တကူစတိုးဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်များ, သွင်းကုန်နှင့်စသည်တို့ကို, သတိပေးချက်များဖန်တီးအခြား application များမှ data ပို့, သူတို့ကိုတင်ပို့နှင့်အတူ
စစ်မှန်သောဖုန်းကို Download လုပ်ပါ
လျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပြီး run ။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "ဆက်သွယ်ရန်".
drop-down list ထဲမှာမြှားအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ကယ်ဖို့တည်နေရာကိုရွေးပါ။
နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "အိုကေ".
ဖုန်းနံပါတ်နှင့်စာနယ်ဇင်း Enter "အိုကေ".
ဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့, တစ်ဦးမြို့တော်စာတစ်စောင်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ပေါ်မှာ Tapnite ။
ဒီ app ကိုသင်အဆက်အသွယ်အမည်များနှင့်အချို့နံပါတ်များထံမှပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, တစ်ဦးချင်းစီဖုန်းမြည်သံ assign စည်းလုံးခြင်းနှင့်ကိုဝေခွင့်ပြုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဒေတာကို Save ကိုသင်အလွယ်တကူလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သူတို့အားဝေမျှဒါမှမဟုတ် SMS ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့အားသာချက်နှစ်ခုက SIM-ကတ်များနှင့်အတူ devices များရဲ့ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် Applications ကို-dialer
ကအဆက်အသွယ်မှကြွလာသောအခါ, ဒီမှာမအရည်အသွေး, အစား, ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရေအတွက်ကို - သူတို့အပို, အခက်ခဲကြောင့်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တစ်ခုကိရိယာခြေရင်းအဆက်အသွယ်လွှဲပြောင်းနှင့်အတူဆက်စပ်အသုံးပြုသူကြုံတွေ့အဓိကအခက်အခဲများ။ အထူးဖွံ့ဖြိုးပြီးလျှောက်လွှာကိုသုံးပြီးသင်ဤတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးပါမည်။ အဘယ်တစ်ဦးသင်အသုံးပြုဖုန်းနံပါတ်များကိုကယ်ဖို့လမ်း? မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါ။
ဗီဒီယို Watch: 10 ways Android is just better (အောက်တိုဘာလ 2019).